Lalao Android maimaim-poana farany - famoahana, hevitra, fitaka | Androidsis (Pejy 9)
Tari-dàlana kely iray ho lasa mpanazatra Pokémon GO tsara miaraka amin'ny lafin-javatra sasany amin'ny lalao Nintendo.
Super Mario Creator Miyamoto dia manazava ny antony mahatonga ny lalao Nintendo ho tsara tokoa
Mandritra ny fiandrasana ny lalao Nintendo roa manaraka hidina amin'ny Android, i Miyamoto dia manazava ny antony tena tsara ny lalaony
Ny piozila mahavariana Zenge dia amidy ao amin'ny Play Store amin'ny $ 0,10
Zenge dia piozila manana kalitaon'ny fahitana ambony sy ny filalaovana izay azonao idirana androany hividianana 0,10 €.
Misy ny fifaninanana ao amin'ny Clash Royale miampy kianja vaovao sy karatra vaovao 4
Tonga tao amin'ny Clash Royale ihany ireo fifaninanana tamin'ny farany mba hahafahanao milalao ao amin'ny faritra misy anao amin'ireo mpilalao rehetra izay manandrana maka ny tratra farany
Miandry anao amin'ity mpihazakazaka tsy misy farany antsoina hoe Asgard Run ity ny mpiady Vikin
Asgard Run dia manolotra mpihazakazaka tsy manam-petra miaraka amina kalitao teknika lehibe izay hitondra anao any amin'ny tontolo medieval izay ny Vikings no mahery fo.
Fiara mihazakazaka eo anelanelan'ny mpilalao roa amin'ny hazakazaka CSR Racing 2 mamirapiratra
CSR Racing 2 dia lalao video multiplayer izay ahitan'ireo hazakazaka eo anelanelan'ny mpilalao roa adrenalinina, fikorontanana ary pikes tsara.
Ny majika an'ny Square Enix dia miverina amin'ny Final Fantasy: Brave Exvius
Square Enix dia nanangana RPG hafa iraisam-pirenena: Final Fantasy Brave Exvius. Manana izany maimaim-poana avy amin'ny Play Store ianao.
Ataovy sary ny lalana ho an'ireo endri-tsoratra mahaliana an'ny Aza Kianja
Ao amin'ny Do not Squared, tsy maintsy manintona ny làlana mankany amin'ireo mahery fo ianao izay tsy hijanona mihazakazaka amin'ny karazana sehatra sy mpihazakazaka tsy misy farany.
Miaraha amin'i Caterpillar Bob amin'ny traikefa nahafinaritra nataon'i Caterzillar sy hetsika feno hetsika
Caterzillar dia sehatra tsara ahafahan'ny Noodlecake Studios mamely ny toerana indray hanolotra antsika hetsika sy fahafinaretana lehibe.
Nitrome dia niverina niaraka tamina mpikaroka tranomaizina tsara izay samy hafa ny lalao rehetra satria namboarina ho azy ny haavony.
Switch The Box, lalao iray mampihetsi-po indrindra amin'ny Android izay ho tianao
Androany izahay dia manolotra ny Switch The Box, lalao mahazatra amin'ny fiankinan-doha indrindra izay nahafaly ahy ny nanandrana ny terminal Android-ko.
Ny lalao video Android 15 tsara indrindra amin'ny 2016
Aorian'ny antsasaky ny taona dia efa afaka maneho hevitra momba ny lalao Android 15 tsara indrindra amin'ny 2016 isika, izay ahitantsika an'i Clash Royale na Astra.
Supercell dia manome antsipiriany bebe kokoa momba ny fifaninanana Clash Royale
Supercell dia te-handefa maodin-dalao vaovao antsoina hoe fifaninanana izay hitondra fahafinaretana betsaka amin'ity lalao mahafinaritra ity. Manana antsipiriany bebe kokoa izahay.
Pets: Unleashed, betan'ny Elektronika ho an'ny lalao-3 avo lenta
Pets: Unleashed dia lalao-3 tena tsara miaraka amina fivelarana ara-teknika tsara ary ahitanao biby fiompy sariaka isan-karazany.
Ampiasao ny herinao selestialy hamoronana na handrava izao tontolo izao pixel ao amin'ny The Sandbox Evolution
Ny Sandbox Evolution dia mamela anao hahafantatra tsara ny atao hoe andriamanitra izay mahay mamorona sy manimba araka ny itiavany azy.
Galcon 2: Galactic Conquest dia manondrika anao amin'ny fandresena ny galaxy miaraka amin'ny multiplayer
Galcon 2: Galactic Conquest dia lalao video iray izay manambatra ny paikady sy ny multiplayer hanehoana filalaovana tena mahasarika.
PKTBALL dia lalao tenisy mahavariana miaraka amina mpilalao 4 marobe eo an-toerana
PKTBALL dia mametraka antsika alohan'ny lalao tenisy mahazatra, izay ahafahanao manana ny fahatsapana mitovy amin'ny noraisin'ireo mpilalao amin'ity fanatanjahantena ity.
Mitaingina ny biby dia indrindra any Rodeo Stampede, vaovao amin'ny Lalao Yodo1
Rodeo Stampede dia vaovao avy amin'ny studio miandraikitra ny Crossy Road. Mitantana zoo iray manontolo ary mihaza biby entina any amin'ny toerana misy anao.
Zombieville USA 2 dia mihaika anao amin'ny apokalypsy zombie amin'ny alàlan'ny tifitra tsara
Zombieville USA 2 dia miverina ao amin'ny Play Store miaraka amin'ny atiny tsara sy famonoana zombie iray manontolo izay tsy maintsy ivelomanao ihany.
Ny lalao arcade 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Lalao video arcade 5 ho an'ny Android izay hitondra anao amin'ny fotoanan'ny nostalgia toy ny Crazy Taxi na ny trilogy Double Dragon ary ireo seranana mamiratra.
Clash Royale dia miasa amin'ny fifaninanana amin'ny fanavaozana manaraka
Ny zavatra manaraka ao amin'ny Clash Royale dia ny fifaninanana ho an'ireo mpilalao mahay indrindra eto an-tany hiadiana amin'ny valisoa mahaliana.
Zavatra 6 tokony ho fantatrao momba ny Minecraft Realms
Ny Minecraft Realms dia mamela ny namanao rehetra, na amin'ny Android, iOS na Windows 10, hilalao amin'ny mpizara an-tserasera 24 ora isan'andro, 365 andro isan-taona.
Hay Day dia nohavaozina miaraka amin'ny lohahevitra varotra sy fahavaratra
Hay Day dia navaozina niaraka tamin'ny varotra teo amin'ny manodidina sy ny lohahevitra fahavaratra tamin'ny andro nanombohan'ity daty fahavaratra ity ho an'ny maro.
Manomboka anio 21 jona dia ampiharina ny fanovana ireo karatra mba hampifandanjana ireo lalao na hahatonga azy ireo ho lasa adala aza.
Lalao video vaovao 3 no nambara tamin'ny E3 2016 hijerena
Lalao video telo ho tonga amin'ity taona ity ary efa nambara tamin'ny E3 2016 hanolotra traikefa amin'ny lalao samihafa amin'ny Android.
Mitantana gara iray manontolo miaraka amin'ny Station Manager, ilay vaovao avy any Kairosoft
Station Manager no vaovao avy any Kairosoft ary mametraka anao eo alohan'ny fitantananana gara miaraka amin'izay rehetra tafiditra ao.
Mamorona karazan-javaboary rehetra amin'ny DeNA vaovao antsoina hoe Monster Builder
DeNA dia mitondra antsika Monster Builder, lalao vaovao amin'ny Android izay tokony hamoronana zavaboary matanjaka indrindra hiatrika ny fahavalo amin'izy ireo.
Dawnbringer dia RPG misokatra eran'izao tontolo izao izay ady sy sary 3D no mahery setra
Lalao video manazava ny kalitao ary mitondra anao any amin'ny RPG misokatra tontolo izay mendrika ny deraina ny ady sy ny kalitaony teknika.
Hitsambikina, manidina ary ampio ilay Knight knight amin'ity sehatra antsoina hoe Cat Knight Story ity
Cat Knight Story dia lalao video an-tsehatra izay miaro ny fomba Retro amin'ny fahitana ary manana singa avo lenta maromaro.
Mandehana any amin'ny faran'ny Eurocup amin'ny alàlan'ny fitifirana ny tanjona amin'ny Ketchapp Football
Lalao baolina kitra mahazatra izay tsy maintsy kendrenao miaraka amin'ireo famafana ireo izay hivadika ho tifitra marina amin'ny tanjona.
Ahoana ny fomba filalaovana ny lalao baolina kitra miafina vaovao ao amin'ny Facebook Messenger ary, ankoatr'izay, baskety
Ankoatry ny fahafahanao milalao ny lalao mini miafina vaovao ao amin'ny Facebook Mesenger, dia afaka milalao baskety ihany koa ianao.
Ny gadget azo itondra dia ho fitaovana ho an'ireo mpankafy Pokémon GO, izay afaka hilalao azy io amin'ny volana Jolay raha misy izany.
Ketchapp Basketball dia lalao Basketball tsotra ho an'ny Android izay mahatonga anao hifikitra hatramin'ny voalohany noho ny fahatsorany lalina.
Ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Clash Royale dia iray amin'ireo toetra tian'ny maro hampanginana azy na esorina. Nilaza i Supercell fa tsy hanao izany.
Tigerball, lalao tsotra sy mampiankin-doha ho an'ny Android izay tsy hahafahanao mijanona tsy manandrana mamily ny baolina
Androany aho te-hanolotra sy hanome soso-kevitra an'i Tigerball, lalao kilasika fanipazana ny baolina ary fanodikodinana azy handroso izay nanomezana azy fiolahana.
Minecraft dia mandray dingana lehibe mankany amin'ny lasa lalao video cross-platform
Hatramin'ny Friendly Update, azo atao ny milalao lalao mitovy amin'ny PC, fitaovana Android, iPhone ary Gear VR.
Betheda dia manomana fanavaozana tsara ho an'ny Fallout Shelter amin'ny volana Jolay, ankoatry ny fandefasana ny kinova PC an'ity mpitantana fialokalofana nokleary ity.
Raha mitady hiatrika mpilalao hafa ianao amin'ny PvP mavitrika sy ny safidy hidirana amin'ny iraka tsara dia apetraho ny Combo Clash.
Mifaninana amin'ny kamio anao amin'ny mpilalao hafa ao amin'ny MMX Hill Climb
Midira amin'ny kamionanao, mameleza ny fitsambikinana tsara indrindra ary tantano tsara ny entonao ao amin'ny MMX Hill Climb, lalao misy maodely freemium somary henjana be.
Crab War dia lalao video clicker izay misy resaka foza ny zava-drehetra
Miala tsiny amin'ny fiarovana ny taninao dia tsy maintsy hitarika ny adin'ny foza ianao amin'ny lalao video clicker antsoina hoe Crab War
Ampidino ny Traffic Rider izao, iray amin'ireo lalao simulasi tsara indrindra hahitantsika ny fahafinaretana amin'ny fitondrana môtô amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka
Androany aho te hampahafantatra anao ny Traffic Rider, iray amin'ireo lalao simulasi mitondra fiara tsara indrindra.
Heroes of Loot 2 dia mpikaroka tranomaizina roguelike avo lenta ho an'ny Android anao
Ny fahafatesan'ny Perma na ny fahafatesana maharitra no tena mampiavaka ity roguelike any an-tranomaizina antsoina hoe Heroes of Loot 2, izay efa ao amin'ny Android.
Ampio ilay soavaly tsy reraka ao amin'ny tantarany epic antsoina hoe Nonstop Knight
Ao amin'ny Nonstop Knight dia manana clicker iray izay miavaka amin'io tontolo 3D io isika izay am-pitandremana ilay tranomaizina tsy misy fitsaharana.
Tongava totozy eo ambadiky ny sokatra sokatra ao amin'ny sokatra ady lehibe
Ny Tortoise War dia mametraka anao alohan'ny totozy lehibe izay tsy maintsy mametraka tank lehibe izay hiatrehany onjan'ny fahavalon'ny karazana rehetra.
Gravity Switch, ny lalao tsy azo atao an'ny Ketchapp
Androany izahay dia manolotra ny lalao tsy azo atao an'ny Ketchapp izay amin'ny anarana hoe Gravity Switch dia manandrana ny faharetantsika sy ny hozatra.
Sintomy ny Asphalt Nitro izao, ny «Asphalt 8 Lite» natao manokana ho an'ireo terminal tsy manam-bola firy
Androany dia asehoko ny Asphalt Nitro, ny Asphalt 8 Lite ho an'ny terminal misy loharano vitsivitsy izay tsy mila 25 Mb fitehirizana maimaimpoana fotsiny amin'ny Android-nay.
Làlana Disney Crossy. Ankafizo ny lalao kilasika amin'ny fiampitana ny arabe miaraka amin'ireo olo-malaza tianao amin'ny sarimihetsika Disney
Androany aho dia manoro hevitra ny Disney Crossy Road, ny lalao an-tsenan'i Disney miorina amin'ny Crossy Road malaza izay ho tian'ny ankizy kely ao an-trano.
Mandresy planeta amin'ity RTS miorina amin'ny node antsoina hoe NeoWars ity izay mitondra anao any amin'ny habakabaka ivelany mba hiatrika mpanohitra fahavalo telo isaky ny ambaratonga.
Mpihazakazaka tsy manam-petra avy amin'ny mpamorona ny Subway Surfers tonga miaraka amin'ny Blades of Brim sy ny heriny lehibe amin'ny majika sy Knights miaraka amin'ny sabany.
Rahalahy: Tale iray an'ny Zana-lahy roa dia mametraka anao alohan'ny tantara iray izay tokony hanampianao ny zanany roa lahy hitady fanasitranana ho an'ny rainy marary.
Fahitana fahitana sary eo amin'ny sehatra avo indrindra amin'ny tifitra antsoina hoe Sky Force Reloaded
Sky Force Reloaded dia tifitra tsara indrindra amin'ireo izay mendrika fahamendrehana hametrahana azy mandritra ny volana maro.
Mifehy ny maso roa indray mandeha amin'ny zavatra vaovao adala avy amin'ny Ketchapp Games antsoina hoe Eyes Cube
Ny Ketchapp Games dia mamerina lalao video mahazatra izay amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy mifehy maso roa miaraka ianao nefa tsy adala amin'izany.
Mikaroha planeta ary ampiasao ny hery misintona amin'ny tombotsoanao ao amin'ny arc arc mitantara Astra
Astra dia mitondra antsika amin'ny angano grika hametraka antsika eo alohan'ny lalao video mahafinaritra amin'ny lafiny teknika rehetra izay avy amin'ny iOS.
Inona no miandry antsika ao amin'ny «Fanavaozana am-pitiavana» ​​an'ny Minecraft Pocket Edition
Ny kinova 0.15, na fantatra amin'ny anarana hoe "Friendly Update", dia hitondra vaovao manandanja toy ny filalaovana namana Xbox Live sy maro hafa.
Manomboka androany dia efa azonao atao ny misintona maimaimpoana ny Farming Simulator, iray amin'ireo simulator traktera tsara indrindra
Vivendi dia mandray ny Gameloft, mpanova ny lalao finday
Vivendi dia nahazo an'i Gameloft tamin'ny fividianana 61,71% ny anjarany ary ankehitriny mankany amin'ny fividianana Ubisoft hananana fahitana bebe kokoa amin'ny lalao.
Soccer Stars, Ny lalao badge soccer amin'ny Internet mahazatra izay hampifandray anao hatramin'ny voalohany
Soccer Stars no lalao filalaovana baolina kitra mahazatra hilalao an-tserasera amin'ny Android miaraka amin'ireo mpanohitra manerana an'izao tontolo izao na miaraka amin'ireo namanao Facebook.
Clash of Clans dia havaozina miaraka amin'ireo singa vaovao, ozona ary ady mahafinaritra
Ny maody Clash of Clans vaovao dia ny mba hilalaovan'ny mpikambana ao amin'ny fianakavianana am-pilaminana mba hizaha toetra ny fanafihana, ny fiarovana, sy ny maro hafa.
Miadia amin'ny lehiben'ny samurai ao amin'ny Madness Ninja mahatsikaiky sy mahatsikaiky
Ninja Madness dia sehatra tsara ahafahanao mihetsika toy ny saka hialana amin'ireo mekanika rehetra izay maniry anao hamita ny lalao.
Hifehy ny hery misintona amin'ity kianja antsoina hoe Gravity Square ity
Gravity Square dia sehatra iray izay tsy maintsy anampianao ilay mpihetsiketsika hifehy ny hery misintona ary hahafantatra ny fampiasana azy ho tombontsoany.
Ilay mpihaza dia lasa mpihaza amin'ny vanim-potoana fianjerana lehibe
Amin'ny vanim-potoana fianjerana dia ho lasa biby ianao izay tsy maintsy mamono ireo mpihaza rehetra sy ny lehibeny izay te-haka ny vola madinika rehetra avy aminao.
Sparkwave, mpihazakazaka tsy misy devoly miaraka amin'ny mozika elektronika
Sparkwave no zava-baovao avy amin'ny Lalao Crescent Moon izay miaro ny techno, tontolo hexagonal ary tsipika tsy maintsy hainao manokana.
Ny Air Attack 2 dia mametraka anao eo alohan'ny shoot-em-up misy sary 3D mahafinaritra
Raha mitady lalao video hitifitra toa ireo taloha ianao dia Air Attack 2 no valiny iray izay hitondra seho iray manontolo amin'ny efijery findainao.
CATTCH dia platformer manokana feno loko sy zava-miafina
Ampio ilay mpihetsiketsika CATTCH mahafinaritra hamerina ny firenena keliny tsara tarehy amin'ny sehatra avo lenta feno loko.
Ireo mpankafy Candy Crush Saga dia mila miala sasatra tsindraindray amin'ireo safidy dimy kalitao maimaimpoana ireo.
Bowling King, Bowling an-tserasera mampihetsi-po anao hihaika ny mpilalao erak'izao tontolo izao
Androany dia manolotra lalao bowling an-tserasera aminao izahay, bowling an-tserasera na bowling an-tserasera ahafahantsika milalao amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ireo mpanohitra tena izy manerantany.
Miitomo very setroka taorian'ny nanombohany nahagaga
Miitomo dia nanomboka tsara rehefa navoaka tamin'ny fisintomana an-tapitrisany, saingy toa very ny gadona tamin'ny herinandro voalohany.
Ny lalao Crescent Moon dia efa namoaka lalao Android kalitao vitsivitsy izay misy maimaim-poana.
Alefaso ny backhand mahery indrindra hamela ny mpanohitra anao hihinana loto ao amin'ny Ten Tap iray
Tongava Rafa Nadal amin'ity lalao video arcade ity amin'ny lalao tsotsotra nefa mitondra ny fahatsapana tsara indrindra amin'ity fanatanjahantena ity.
Esory ny karazan-jiolahim-boto rehetra ary avereno ny fandriam-pahalemana amin'ny Raid Tactics
Ao amin'ny Raid Tactics dia hanana mahery fo telo ianao hahafantatra izay mitranga eto amin'izao tontolo izao amin'ireo herin'ny ratsy izay toa nanelingelina ny fandriam-pahalemana.
Elsword: Evolution dia anime MMORPG 2D tsara miaraka amin'ny ady lehibe sy ny fahafaha-manao zavatra maro
Ao amin'ny Elsword: Evolution dia ho afaka hanambady ianao, hiady amin'ny PVE, hampisondrotra, hamorona foko, hifanandrina amin'ireo mpilalao hafa, ary hijery ireo tontolo 2D manankarena ananany.
Platformer arcade antsoina hoe Super Rocket Pets aingam-panahy avy amin'i Jetpack Joyride
Raha mitady mpihazakazaka tsy misy farany izay mitovy amin'ny Jetpack Joyride mahafinaritra ianao dia hitanao amin'ny Super Rocket Pets, lalao video avo lenta ity.
Mekorama dia piozila manintona sy mahafinaritra miaraka amin'ny fomba fahita tena tsara
Mekorama dia lalao video misy piozila amin'ny endrika maritrano no hitarika anao hamaha azy ireo hahitanao hatsarana hafa kanto.
Vector 2, ny fiverenan'ny iray amin'ireo mpihazakazaka tsy misy farany fantatra amin'ny Android
Raha mpihazakazaka tsy manam-petra ianao, Vector 2 dia mitondra ny tsara indrindra amin'ny anaram-boninahitra voalohany miaraka amin'ny sary misy kalitao tsara amin'ny fahitana. Maimaim-poana ao amin'ny Play Store.
Basketball Stars, lalao basikety manaitra ho an'ny Android
Androany dia manolotra sy manoro hevitra ny Basketball Stars izahay, lalao baskety an-tserasera mahafinaritra iray hiaina ny fientanam-pon'ny baskety eny an-dalambe any Etazonia.
8 Ball Pool, misintona ny lalao pisinina amerikana an-tserasera tsara indrindra ho an'ny Android izao
Androany dia manolotra 8 Ball Pool aho, ny lalao pisinina amerikana tsara indrindra ho an'ny Android izay ahafahantsika milalao amin'ny Internet miaraka amin'ireo tena mpanohitra manerantany.
Ny fisoratana anarana hanandramana Pokemon Go dia misy any Etazonia izao
Any Etazonia dia efa azonao atao ny misoratra anarana amin'ny beta hanandramana ho tsara vintana hanasana anao ary hametraka Pokémon Go amin'ny findainao.
Amin'izany fifandanjana lalao izay hatao amin'ny 18 Mey ao amin'ny Clash Royale izany dia misongadina ny fitomboan'ny herin'ny taolana sy i Witch.
Ny PopCap Games dia mandefa ny kintana Bejeweled hitondra lalao vaovao 3 hafa izay ny vatosoa no mpiorina voalohany amin'ireo fitambarana.
Battleborn Tap dia mitondra antsika amin'ny clicker RPG kalitao avo lenta amin'ny lafiny maso sy ara-teknika fa tsy misy toa azy ny kinova ho an'ny PC sy ny consoles.
Tap Knight sy ny Dark Castle dia tsindry RPG Retro izay hahagaga anao
Tap Knight and the Dark Castle dia clicker mpihazakazaka tsy misy farany 2D RPG izay tsy maintsy mamorona ekipa iray hanafoanana ny herin'ny ratsy amin'ny planeta ianao.
Haavo vaovao isan'andro miaraka amin'ny Leap Day, ilay sehatra Nitrome vaovao
Nitrome dia mitondra sehatra tsara hanasongadinana ireo sary an-tsokosoko ary ambaratonga vaovao izay hampidirina isan'andro ao anatin'ity Andro Leap mahafinaritra ity
Miandry anao ny harena taloha amin'ny Uncharted: Fortune Hunter
Uncharted: Fortune Hunter dia piozila tsara izay mihoatra ny 200 no miandry anao amin'ny tontolo efatra samy hafa. Lohateny finday tsara ho an'ny kinova fampiononana.
Fahano ny antsantsa lehibe ao amin'ny Hungry Shark World
Hungry Shark World dia mamela anao hizaha ny halalin'ny rano amin'ny alàlan'ny fikirakirana ny iray amin'ireo antsantsa 17 miandry anao hanome sakafo azy ireo.
Tonga bera ninja amin'ny lalao ady lehibe Bushido Bear
Bushido Bear dia lalao vaovao avy amin'ireo mpamorona ny Alphabear izay manolotra anao hiady amin'ny tena izy amin'ny alàlan'ny fihetsika na famafana.
Maimaimpoana ny fiampitana biby sy tandindona
Freemium dia midika fa ny Animal Crossing sy Fire Emblem dia azo alaina maimaim-poana, saingy hanana micropayments ao anatin'ny fampiharana izy ireo.
Miitomo dia efa mamela anao manasa namana amin'ny alàlan'ny mailaka, SMS ary maro hafa
Ny mailaka, ny SMS na ny tsipika izao dia azo ampiasaina any Miitomo handefasana ny fangatahan'ny namana iray amin'ny olona iray. Fanampiana vaovao hafa koa no nampiana.
Tome of the Sun dia MMO vaovao miaraka amina tranomaizina, asa-tanana, PvP, adim-poko ary fitakiana loharanon-karena ambany
Tome of the Sun dia MMO vaovao izay manana izay rehetra takiana amin'ny lalao amin'ity karazana ity: ny fanaovana asa tanana, ny pve, ny pvp, ny tranomaizina, ny fianakaviana ary ny kilasy isan-karazany.
Tongava mahery fo lamaody amin'ny Pixel Super Heroes
Pixel Super Heroes dia mpihazakazaka tsy manam-petra miaraka amin'ny atiny maro karazana izay tsy maintsy mamorona ekipa maherifo ianao.
Super Phantom Cat, sehatra mahafinaritra izay miaraka amin'ny saka mahafatifaty
Navadika ho pussycat ianao dia tsy maintsy mamaky ambaratonga ampolony miandry anao ao amin'ity sehatra lehibe antsoina hoe Super Phantom Cat ity.
Gangfort dia kinova platformer 2D an'ny Team Fortress 2
Gangfort dia lalao video izay hampahatsiahy anao ny Team Fortress 2 amin'ny fanananao fitoviana kely amin'ny lalao mifototra amin'ny sehatra sy piksela 2D.
Haingam-pandeha toy ny Fox dia sehatra tsara hifandraisana amin'ny fomba hafa
Tsindrio miverimberina ao ambadiky ny findainao mba hanao ilay amboahaolo, ilay mahery fo amin'ity lalao antsoina hoe Fast like a Fox ity, mihazakazaka
Aza mandatsaka ny atody mazika amin'ny kamio amin'ny Risky Road
Ny Ketchapp Games dia miverina amin'ny ady miaraka amin'ny Risky Road, lalao video vaovao izay mpitondran'ny atody volamena majika.
Rockstar Games dia amidy miaraka amin'i GTA sy Max Payne
Rockstar Games dia mamoaka indray ny fifanarahana mahaliana amin'ny lalao andiany Grand Theft Auto sy Max Payne amin'ny vidiny antsasany.
Mipoitra ny antsipiriany momba ny lalao amin'ny lalao video Nintendo roa manaraka
Amin'ny fararano dia hanana ny lalao video roa manaraka isika avy amin'ny Nintendo, Fire Emblem ary Animal Crossing. Ny filohan'ny Nintendo dia nilaza zavatra momba azy ireo.
Ny Deer God, iray amin'ireo lalao video kanto pixel tsara indrindra, dia lasa afaka
Ny Deer God dia lalao navoakan'ny Crescent Moon Games ary ao anatin'izany ny kanto pixel no mihira ny hirany tsara indrindra. Manana kinova maimaimpoana ianao izao.
Ny fialantsinin'i Nintendo amin'ny tsy famoahana lalao video an'ny Mario amin'ny finday
Nintendo dia tsy te hiloka amin'ny finday amin'ny alàlan'ny tsy fandefasana lalao video misy ny iray amin'ireo endri-tsoratra malaza.
Clash Royale dia nohavaozina amin'ny karatra vaovao, valisoa bebe kokoa ary lalao mivantana amin'ny namana
Clash Royale dia nahazo ny fanavaozana lehibe voalohany izay ahitana karatra vaovao enina, mijery lalao namana amin'ny fotoana tena izy sy maro hafa.
Ny lalao Batman tsara indrindra ho an'ny Android
Eto izahay dia manome anao safidio ny lalao Batman tsara indrindra ho an'ny finday avo lenta na takelaka Android
[APK] Sintomy izao ny Iron Maiden: Legacy of the Beast, ilay gitara tsara indrindra mifantina amin'ny Android-nao
Raha mitady RPG ianao ary mpankafy ny tarika mozika mavesatra anglisy dia aza hadino ny fotoana nifanaovana tamin'i Iron Maiden: Legacy of the Beast
Pathfinder Adventures dia lalao karatra ho an'ireo tia RPG
Ny Pathfinder Adventures dia avy amin'ny endrika ara-batana mankany amin'ny nomerika mba hitondra anao ny lalao karatra RPG tsara indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ny Android.
Ny iray amin'ireo kilasika lehibe amin'ny lalao video miverina miaraka amin'i Pang Adventures
Pang Adventures dia fanontana vaovao an'ny franchise malaza natolotry ny Capcom am-polony ora maro lasa izay.
Esory ny fahavalo amin'ny hafainganan'ny rivotra ao amin'ny Rush Fight
Rush Fight dia mamela anao hifehy ny fotoana hisafidianana ny kapoka manaraka ary amin'izany dia manala ireo fahavalo tsy manam-petra izay ho tonga eo aminao.
Miandry anao ny PR8 hanampy anao hamaha olana zato amin'ny AfterLoop
Amin'ny AfterLoop dia mila manampy robot kely ianao hamaha piozila marobe ao amin'ny tontolo noforonin'ireo mpamorona.
Illi dia piozila amin'ny sehatra iray izay misy lanjany ny hery misintona
Illi dia mpiorina piozila izay tsy maintsy hitondranao zavaboary hafahafa izay mitsambikina amin'ny fotoana mety indrindra amin'izany.
Star Knight, sehatra misy hetsika maro, fomba fijery tsara ary fikitika RPG
Raha mitady lalao sarotra ianao dia ho anao ny Star Night. Fihetsiketsehana haingam-pandeha, hazakazaka hita maso tsara, ary singa RPG sasany miandry.
Sintomy ny Angry Birds Action izao, ny Rovio vaovao izay efa misy maimaim-poana ao amin'ny Google Play Store
Sintomy ny Angry Birds Action izao, ny lalao Rovio vaovao izay misy manerantany amin'ny alàlan'ny Google Play Store maimaim-poana.
Ny lalao tsara indrindra amin'ny Fetin'ny Reny
Lalao video dimy izay tonga lafatra amin'ilay andro manokana dia ny Fetin'ny Reny izay hankalazaina amin'ny Alahady ho avy izao.
Miankina amin'ny Star Wars? Ny telo amin'ny lalao tsara indrindra amin'izy ireo dia amidy amin'ny Android
Star Wars izao dia manana lohateny Android telo izay nahena ny vidiny: KOTOR, Lego Star Wars ary Star Wars Pinball 4
Minecraft dia azo alaina ho an'ny Gear VR amin'ny Galaxy S6, S7 ary Note 5
Mojang dia nanambara avy amin'ny bilaoginy ny fanombohana ny fanontana Minecraft ho an'ny Samsung's Gear VR amin'ny Galaxy S6, S7 ary Note 5.
Fanitarana HearthStone: hibitsibitsika amin'ireo andriamanitra taloha dia misy izao
Ny fanitarana vaovao ho an'i Hearthstone antsoina hoe Whisper of the Old Gods dia azo alaina amin'ny Android izao.
Animal Crossing sy Fire Emblem no lalao video roa manaraka an'i Nintendo ho an'ny finday avo lenta
Nintendo dia handefa ny lalao video roa voalohany ho an'ny smartphone amin'ny fararano aorian'ny fahombiazan'ny Nintendo: Animal Crossing and Fire Emblem.
Bebe kokoa amin'ny lalao Pokémon Go avy amin'ny horonantsary iray ao amin'ny YouTube
Ny filalaovana Pokémon Go dia miseho indray amin'ny horonan-tsary ahafahanao mahita ampahany amin'ny filalaovana an'ity lalao nampitomboina ity
Tiny Rogue dia toy ny rogue-turn-based izay ho very any amin'ny tranomaizina tsy misy dikany ianao
Tiny Rogue dia lalao toy ny rogue miaraka amina tranomaizina namboarina kisendrasendra izay handray ny karazana biby goavambe amin'ny alàlan'ny fandoavana € 3,18 ho azy.
Ny lalao karatra Kittens Exploding K Fantens dia azo alaina amin'ny Android ankehitriny
Kittens exploding dia kilalao karatra avo lenta izay tokony hisorohana ny zana-kisoa hipoaka hanohy milalao.
Aringano ireo vahiny eny ambonin'ny volana maizina ao amin'ny Orbitron Arcade
Mpitifitra habaka Retro mahazatra no natolotr'i Orbitron Arcade izay afaka gaga anao amin'ny fototra sy ny fototr'ilay gamer ao aminy.
Miandry anao amin'ny Warhammer 40K: Freeblade ny Imperial Knight
Raha misy zavatra mamaritra ity Warhammer 40K: Freeblade ity dia mahavariana ny sary 3D mba hamela antsika saiky tototry ny kalitao be loatra.
Taichi Panda Heroes no vaovao avy amin'ny SnailGames hitarika anao amin'ny MMO tsara amin'ny findainao
Taichi Panda Heroes no vaovao avy amin'ny SnailGames mba tsy hanan-java-mahory na inona na inona ianao rehefa miditra amin'ny MMO avo lenta sy voadio tsara
Ny hoavin'ny ala Goomswood dia eo am-pelatananao ao Elvin: ny sehatry ny rano
Elvin: ny rano Sphere dia sehatra misy kalitao teknika lehibe izay entanin'i Mario sy ny hafa hanambatra kilalao manokana.
Ampio ny sombin-kazo noana hihinana ny popcorn rehetra ao amin'ny Pull My Tongue
Ny zava-baovao ao amin'ny Noodlecake Studios dia mitarika antsika hanampy an'i Greg the chameleon izay manana fahalianana lehibe amin'ny sakafo iray: popcorn.
Mandosira ny mpanohitra anao ao amin'ny Versus Run, vaovao amin'ny lalao Ketchapp
Versus Run no vaovao avy amin'ny Ketchapp Games ary manolotra antsika ny lalao izay tokony handosiranay ny mpanohitra anao ao anatin'ireo trano-maizina manokana.
Ampiasao ny artillery ady rehetra ao amin'ny REDCON lehibe sy mahatalanjona
REDCON dia zavatra hafa noho izay hitanao ao amin'ny Google Play Store hametraka ny tenanao alohan'ny fiarovana ny trano mimanda anao amin'ny lalao tokana.
Ireo voatendry dimy handray ny lalao video indie tsara indrindra amin'ny Google Play Awards 2016
Google dia nanolotra lalao video dimy ho an'ny indie tsara indrindra amin'ny taona amin'ny Google Play Awards izay hatao ao amin'ny Google I / O 2016.
BoombSquad, ady multiplayer mahafinaritra ho an'ny Android miorina amin'ny baomba
Androany izahay dia manolotra ny BoombSquad, lalao miady amin'ny multiplayer mahafinaritra sy adala ho an'ny Android, izay an-tserasera dia hanana fotoana be handatsahana baomba havia sy havanana isika.
Afaka milalao kilalao multiplayer ao amin'ny Crossy Road ianao izao miaraka amin'ny fanavaozana vaovao
Afaka manana lalao multiplayer tsara miaraka amin'ny namana efatra ianao izao ao amin'ny làlana Crossy lehibe izay nahazo kinova vaovao.
Ireo voatendry 5 handray ny lalao video tsara indrindra amin'ny Google Play Awards 2016
Amin'ity taona ity ny Google Play Awards 2016 dia hotanterahina voalohany, hahalalantsika izay mandresy amin'ireo dimy voatendry amin'ny sokajy lalao tsara indrindra.
Lalao video 16 HandyGames amidy ao amin'ny Play Store amin'ny € 0,16 tsirairay avy
HandyGames dia manolotra lalao video 16 amidy noho ny faha-0,16 taonany. Ny tsirairay amin'izy ireo dia misy amin'ny XNUMX € avy amin'ny Google Play Store.
Ireto lalao video 10 ireto dia misotro avy amin'ny loharanon'ny aingam-panahy izay Clash of Clans fa amin'ny làlana hafa, lohahevitra ary gameplays amin'ny tranga sasany.
Supercell dia miorina mafy amin'ny fanoherana ny cheats ao amin'ny Clash of Clans sy ny lalao hafa
Miorina mafy i Supercell ary nandefa tolo-kevitra vitsivitsy hampitandremana ny mpilalao amin'ny olana mety hitranga.
Ampianarinay anao ny fomba hamaha ny toetra miafina sy miafina rehetra an'ny Disney Crossy Road izay fihaonan'i Buzz Lightyear, Mickey ary bebe kokoa
Misy ny seranan-tsambo Counter-Strike 1.6 amin'ny Android izao
Androany dia natomboka ny seranan-tsambo Counter-Strike amin'ny Android noho ny mpampiasa iray nizara ny antsipirian'ny fametrahana.
One More Dash, lalao tsy andaniam-bola izay tokony hahalalanao ny fomba handrindrana ny hetsika rehetra ataonao
Ny iray More Dash dia mila hakingana ara-tsaina handroso amin'ny alàlan'ny iraka 200 izay hahatongavanao
Toby: The Secret Mine, platformer 2D tsara tarehy aingam-panahy avy amin'i Limbo lehibe
Toby: The Secret Mine dia platformer 2D izay hitondra anao hamakivaky tontolo sy fialamboly mahafinaritra, na dia tsy manana ny maha-izy azy aza izy
Mars Mountain dia arcade tsara ahafahanao manampy ny mpanamory sambondanitra mba hamerina ny sombin'ny sambony mba hiverenany amin'ny tany.
Ny lalao Crescent Moon dia mitondra antsika ity vatosoa kely ity amin'ny endrika lalao 3 misy sary mihetsika pixel sy sary. Izy io dia manana mekanika manokana izay mamaritra azy
Chameleon Run dia iray amin'ireo mpihazakazaka tsy misy farany tsara indrindra amin'ny taona ary asehon'ny isaky ny segondra dia milalao amin'ireo lalao mampihetsi-po ireo ianao.
Ampio i Mowgli amin'ny lalao video ofisialin'ny sarimihetsika The Jungle Book
Navoakan'i Disney ity lalao video mpihazakazaka tsy misy farany ity momba ilay sarimihetsika The Jungle Book izay efa eny amin'ny sinema rehetra ary afaka anampianao an'i Mowgli
Clash Royale dia mahazo vola $ 80 tapitrisa amin'ny volana voalohany amin'ny fiainany
Ny titre vaovaon'i Supercell, Clash Royale, dia nahazo $ 80 tapitrisa tamin'ny volana voalohany tamin'ny fiainany. Ity faran'ny herinandro ity dia mikarakara ny fifaninanana ofisialy voalohany.
Crashlands dia nohavaozina miaraka amin'ny patch "Quality of Life" izay misy sarintany tsara kokoa, zavatra vaovao ary maro hafa
Ny patch "Quality of life" Crashlands dia misy sari-tany vaovao noforonina avy tany am-boalohany, entana vaovao ary fanatsarana maro.
Ny Minecraft Realms dia tonga amin'ny Android amin'ny endrika alpha
Minecraft Realms dia serivisy Mojang manokana izay mamela ny fandoavam-bola isam-bolana hiditra amin'ny mpizara azy manokana. Hita ao amin'ny Minecraft PE amin'ny alpha.
Ny fanavaozana ny Google Play Games vaovao dia ahafahan'ny ID mpilalao sy fidirana amin'ny lalao video mandeha ho azy
Play Games dia nohavaozina mba hanolorana ny fidirana ho azy rehetra sy ny fahaizan'ny mpilalao ID mamorona.
Miitomo dia efa manana mpampiasa 4 tapitrisa
Miitomo dia lalao sosialin'i Nintendo izay misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary nahavita nahatratra efatra tapitrisa ny mpampiasa tao anatin'ny iray volana
Azonao atao izao ny misintona sy mametraka ny Pokémon TCG beta izay anasana ny rehetra
Azonao atao izao ny misintona sy mametraka ny Pokémon TCG, na dia mbola ao anaty beta misy sisiny marokoroko aza hivoaka alohan'ny famaranana farany
Aringano ireo trano sy tanàna iray manontolo miaraka amin'ny karazana fiara ao Flail Rider
Raiso ny fiaranao, mandehana mankany an-tanàna ary aringano izay hitanao rehetra ao aminy ao amin'ny Flail Rider, lalao video misy fijerena sary mahafinaritra
Geki Yaba, sehatra tsara ahafahanao mamonjy ny andriambavy ary manangona ba kiraro
Geki Yaba dia mametraka anao eo alohan'ny sehatra lehibe iray izay tsy maintsy anampianao ilay gnome hamerina ny zanany vavy sy ny ba kiraro sasany.
Very any amin'ny tranomaizina tsy manam-petra amin'ity crawler tranomaizina antsoina hoe The Slimeking's Tower ity
Mpitsikilo trano-maizina miaraka amin'ny The Slimeking's Tower miaraka amina karazana zavatra, hery ary fahaiza-mikaroka trano-maizina tsy manam-petra
Omano ny fikororohana matsiro indrindra amin'ny Slide the Shakes
Lalao iray izay hianaranao ireo fomba fahandro goavambe matsiro indrindra ary mila manompo ao amin'ilay tsatokazo Slide the Shakes manokana ianao
Izao tontolo izao Disney ao amin'ity RPG manaitaitra antsoina hoe Kingdom Hearts X
RPG antsoina hoe Kingdom Hearts X izay hitondra anao hamakivaky ny tontolon'ny nofinofin'i Disney miaraka amin'ireo olo-malaza malaza sy fanta-daza indrindra ao aminy
Midira ao amin'ny trano-maizina pixelated Hammer Bomb
Ny lalao Crescent Moon dia mitondra antsika mpikaroka tranokala mahaliana voalohany izay misongadina amin'ny kanto misy piksela sy manolotra zavatra hafa
Emulator vaovao izay mampitombo ny hafainganana amin'ny famoronana fananganana amin'ny Android 2.0 Studio aorian'ny volana vitsivitsy taorian'ny nanambarana azy
Ny lalao pinball 4 tsara indrindra ho an'ny Android
Lalao video Pinball efatra ho an'ny Android izay manana fizika zavatra tsara indrindra ho an'ny baolina, izay mpilalao fototra amin'ireo lalao ireo
Ireo mpampiasa twitch dia afaka mandefa lalao video Android amin'ny PC-dry zareo izao
Ny mpampiasa twitch dia manana olana lehibe amin'ny tsy fahafahany mivezivezy amin'ny finday, ka nanampy azy ireo ny Bluestacks.
Mickey, Buzz Lightyear ary Donald dia miandry anao ao amin'ny Disney Crossy Road, azo alaina amin'ny Android izao
Ny lalao Yodo1 dia manaingo azy indray amin'ny Disney Crossy Road mba hahafahanao milalao ny endri-tsoratra Pixar sy Disney malaza indrindra toa an'i Mickey na Buzz
TellTale Games dia mampihena ny Minecraft: Story Mode ka hatramin'ny 0,50 ny fizarana voalohany raha mbola mijanona amin'ny vidiny mahazatra ny hafa
Lalao RPG fomba Retro 5 izay ahafahanao very ao amin'ny tranomaizina mahasosotra sy mampidi-doza
Lalao video RPG dimy izay manana kalitao tena tsara ary mampiseho amin'ny ambaratonga inona ny lalao ho an'ity sokajy ity izay manararaotra ny Retro
Angry Birds Action! misy amin'ny Android izao amin'ny faritra voafantina
Tsy misy ho an'ny firenena rehetra Angry Birds Action! Vaovao avy amin'i Rovio hampahafantatra anay ny pinball ho mekanika lalao
Capcom mandefa lalao amin'ny finday miaraka amin'ny New Mega Man, Monster Hunter ary maro hafa
Capcom mandefa lalao mahitsy amin'ny finday miaraka amina fizarana vaovao manangana lehilahy mega vaovao, mpihaza biby goavambe ary maro hafa
Mandosira avy ao am-ponja ao amin'ny tranokala Retrie Run sy Gun
Prison Run and Gun dia sehatra avo lenta izay mamela anao hanao iraka hivoaka ny fonja miaraka amin'ny karazana fitaovam-piadiana sy hitsambikina.
Alefaso ny bozaka miaraka amin'ny ombinao kosmika ao amin'ny ombivavy sy ondry: Mower Mayhem
Cows vs Sheep: Mower Mayhem dia lalao video mahatsikaiky izay tokony hidiranao amin'ny tafiky ny ombivavy kosmika mitaingina bozaka.
Mamolavola ny ekipanao ady amin'ny kairosoft, Skyforce Unite!
Kairosoft dia mitondra antsika Skyforce Unite!, Simulator tsara iray hafa izay tsy maintsy hamoronana ny ekipan'ny ady
Operation Dracula dia iray amin'ireo 'Bullet Hell' tsara indrindra misy ankehitriny amin'ny Android
Arcade "helo bala" ho an'ireo izay manamarika fotoana amin'ny Operation Dracula, ny lalao vaovao indrindra amin'ny Crescent Moon ary tsy hita maimaimpoana
Tariho ny ekipa baolina kitra hafahafa anao amin'ny fandresena farany amin'ny Headshot Heroes
Tapaho ny lohanao amin'ny fitifiranao tanjona hanangonana azy ireo amin'ny lalao baolina kitra fototra mahagaga sy mahaliana antsoina hoe Heroshot Headshot
Mifaninana amin'ireo mpilalao eran'izao tontolo izao amin'ny Rope Racers
Rope Racers dia manana mekanika lalao tena tsotra fa mifantoka amin'ny tena zava-dehibe: ny lafiny multiplayer
Ny fahatongavan'i Nintendo amin'ny fitaovana finday dia manamarika vanim-potoana vaovao ho an'ny lalao video
Nintendo dia nidina tamin'ny finday niaraka tamin'ny Miitomo ary noho izany dia manomboka vanim-potoana vaovao ho an'ny lalao video
Miitomo dia misy any Espana izao, ny lalao voalohany amin'ny Nintendo lehibe
Nintendo tonga amin'ny fitaovana finday hanolorana karazana fialamboly hafa. Miitomo, ny filokana voalohany, dia misy izao.
Ny Minecraft Pocket Edition dia havaozina amin'ny mods sy ny baiko baiko
Minecraft Pocket Edition dia hampiditra tsy ho ela ny fahafaha-mampiasa mods sy ny baiko baiko ho ireo zava-baovao roa lehibe
Lalao video telo manomboka amin'ny 2016 izay tsy andriko ny hilalao
Amin'ireto volana manaraka ireto dia hanana lalao video telo amin'ny Android isika izay mety ho lasa tsara indrindra amin'ny taona miaraka amin'ny lohahevitra sy fomba fiasa samihafa
Tamin'ny 31 martsa, tonga tany Espana i Miitomo, lalao Nintendo voalohany ho an'ny finday avo lenta
Afaka roa andro dia hanana Miitomo any Espana isika amin'ny fandefasana azy izao tontolo izao araka ny nampahafantaran'i Nintendo androany.
Pokémon GO beta dia manomboka any Japon
Ny dingana voalohany amin'ny Pokémon GO beta dia natomboka tany Japon ary ireo mpilalao nasaina dia tsy afaka mandefa ilay fampiharana akory
Konami dia mandefa ny tranofiara an'ny Contra vaovao izay ho tonga amin'ny Android tsy ho ela
Against Mobile dia ho iray amin'ireo filokana lehibe indrindra amin'i Konami amin'ity taona 2016. Iray amin'ireo franchise malaza indrindra amin'ny milina arcade
Latsaky ny 1% ny mpampiasa no mitazona ny indostrian'ny lalao finday
Ny indostrian'ny lalao video ho an'ny fitaovana finday, mitentina 10.000 miliara euro, dia tohanan'ny 0,19% isan-jaton'ny mpampiasa
Ny fampiharana lalao video 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Fampiharana dimy izay hamela anao ho lasa streamer malaza indrindra amin'ny taona raha manana fikirizana, fahaiza-milalao ary fahaizana miresaka ianao
Niantic Labs mizara antsipirihany sy sary Pokémon GO bebe kokoa
Niantic Labs dia namoaka pikantsary sy antsipiriany bebe kokoa momba ny Pokémon GO, lalao video izay ho lasa hetsika iray noho ny zava-misy nitombo
Ny lalao piano iPad ho an'ny Android dia antsoina hoe: "Aza tsindrio ny lakilasy fotsy"
Amin'ity tranga manokana ity dia faly aho mampahafantatra sy manome soso-kevitra ny kilalao piano malaza iPad izay nopihan'ny "paoma manaikitra" ary tonga eto amintsika ho an'ny Android amin'ny kinova lehibe sy nohatsaraina kokoa
Amboary ny fantson-tanàna ao amin'ny Pipe Drain: Lalao Plumber
Mila fanamboarana fantson-drano ny tanàna amin'ity lalao video maimaim-poana antsoina hoe Drain Pipe: Conchant Plumber ity
Tontolo iray an'ny nofinofy, PvP ary RPG no miandry anao ao amin'ny Monster Mountain
Monster Mountain dia RPG izay manana toetra mampiavaka azy amin'ny endrika hita maso sy mifandraika amin'ny ady
Frantic Architect dia ahafahanao mamorona tilikambo avo indrindra miaraka amina sakana marobe izay tsy maintsy fantatrao ny fomba hisafidiananao hendry.
Basketball Stars dia mametraka anao alohan'ny mpanohitra, mpilalao tena izy, mba hitifitra harona bebe kokoa noho izy ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
Paikady ara-potoana tsara indrindra miaraka amin'ny Ady amin'ny Ady Total: KINGDOM
SEGA dia mitondra antsika ny Ady amin'ny ady lehibe: Fanjakana miaraka amin'ny lalao multiplayer, ny votoatin'ny saga ary ny sary sy teknika mahatalanjona rehetra
Doofus Drop eo am-panaovana ny tsy fanajana sy ny habeny amin'ny lalao video
Doofus Drop dia lalao video avo lenta miaraka amina lohahevitra somary tsy manaja sy miloko, fa mahavita mampihomehy antsika ity
Beneath The Lighthouse dia iray amin'ireo lalao Nitrome mahaliana
Lalao Nitrome tsara iray hafa izay tsy maintsy mamindra fitaovam-piadiana izay manodina ny haavony mba hahafahan'ny mpihetsiketsika mankany amin'ny ambaratonga manaraka
Ilay Snake mahazatra Crossy Road amin'ny endriny hita maso ao amin'ny Snake Legends
Snake Legends dia mitondra anao ilay bibilava mahazatra miaraka amin'ny sary Crossy Road izay manome azy endrika tena manintona ary afaka mitily
Mamorona planeta gadonanao amin'ny mozika dihy avy amin'ny Groove Planet
Groove Planet dia lalao video izay mitondra anao alohan'ny handihizana sy hanaovana fety ary tokony hanarahana ny gadona ianao raha te hanana fanamarihana bebe kokoa
Glyde dia mitondra anao hanidina amin'ny alàlan'ny tontolon'ny vector miloko pastel
Ny sary Vector, ny loko pastel ary ny malefaka amin'ny sidina no endri-javatra tsara indrindra amin'ity simulator sidina antsoina hoe Glyde ity
Lalao video manokana Ketchapp miaraka amin'ny Adventure Cube
Adventure Cube dia lalao mahaliana izay tsy maintsy ialanao ny sakana izay hitanao eny an-dalana
Amboary ny fanjakanao ary mahazoa maherifo mahery indrindra amin'ny Lords Mobile
Lords Mobile dia misongadina amin'ny karazan-atiny atolotray amin'ny gameplays isan-karazany manomboka amin'ny fananganana ny fanjakanao ka hatramin'ny ady an-tanana.
Ny Punch Club lehibe dia voajirika im-1,6 tapitrisa
Punch Club dia mamerina antsika amin'ny olan'ny fampidinana tsy ara-dalàna na ny fanapahana hack amin'ny Android miaraka amin'ny hena 1,6 tapitrisa voajirika
Ny lalao video voalohany an'ny Nintendo ho an'ny finday avo lenta dia mahatratra mpampiasa iray tapitrisa
Ny lalao smartphone an'i Nintendo Miitomo dia efa manana mpilalao 1 tapitrisa ao anatin'ny dimy andro voalohany navoaka tao Japana
Nanivana horonan-tsary iray tamin'ny lalao Pokemon GO amin'ny Android
Ny horonantsary iray amin'ny lalao Pokemon GO dia mampiseho amintsika hoe hanao ahoana ny filalaovana azy amin'ny fitaovana Android. Fahagagana izay miandry mialoha ny hahatongavanao
Clash Royale dia nahazo fanovana fihodinana voalohany
Supercell dia mamoaka fanovana vitsivitsy amin'ny karatra isan-karazany amin'ny fihodinana voalohany satria misy manerantany izy io
Telltale dia nanambara ny antsipiriany voalohany momba ny andiany lalao Batman
Telltale Games dia handefa ny andian-dahatsoratra Batman amin'ny Android sy iOS amin'ity taona ity mba hitondra tantara mahafinaritra sy tetika iray hiova arak'ireo fanapahan-kevitra.
Mamorona zaridaina lohahevitra nofinofy ao amin'ny Disney Magic Kingdoms
Disney Magic Kingdom dia mametraka anao amin'ny anjara asan'ny mpamorona parka lohahevitra hitondra anao alohan'ny majika rehetra amin'ny sarimihetsika Disney
Ampio ilay maherifo am-perinasa tsy ho faty ao amin'ny mpanampy an'i ExtremeJobs Kinght
ExtremeJobs Knight's Assistant dia karazana RPG izay nahatonga anao ho mpandroba ny Knight izay somary milay nefa mila ny fanampianao
Ady mifototra amin'ny ady sy sary mahavariana ho an'ity RPG mahafinaritra antsoina hoe 7 Mages ity
7 Mages dia RPG misy sary 3D, feo mahatalanjona ary kalitao tsara amin'ireo singa rehetra mandentika anao amin'ny tantarany mahafinaritra
Hifantoka amin'ny haingam-pandeha vertigo an'ity mpihazakazaka tsy misy farany antsoina hoe BARRIER X ity ianao
Hafainganana mahatsikaiky isaky ny lalao ao amin'ny BARRIER X izay haharitra segondra vitsy monja. Lalao manokana sy tokana noho ny hafainganan'ny
Battle Bay, ny Rovio MOBA izay hiatrehanao mpilalao hafa amin'ny ady an-dranomasina
Ady an-dranomasina eo anelanelan'ny mpilalao dimy no miandry anao amin'ny lalao video Rovio vaovao: MOBA manana kalitao avo tsy misy chicha sasany
[APK] Sintomy ny Miitomo izao, lalao video voalohany an'ny Nintendo ho an'ny fitaovana finday
Miitomo no lalao voalohany navoakan'ny Nintendo amin'ny Android. Manana tambajotra sosialy betsaka noho ny lalao video ahafahanao manamboatra ny Miis
Betsaka kokoa ireo mpampiasa manana Android 6.0 Marshmallow ary anisan'ireo hatsaram-panahiny kely ny lalao miafina toa an'i Flappy Bird
Facebook Messenger izao dia manana lalao kely miafina basikety izay azonao atao amin'ny fotoana rehetra. Atoro anao ny fomba hampiasana azy
Ny lalao video SEGA sy Warner Bros vaovao 9 vaovao tonga amin'ny NVIDIA GeForce Now
SEGA sy Warner Bros dia nanambara lalao vaovao sivy ho an'ny streaming GeForce Now lalao ho an'ny takelaka NVIDIA Shield.
Ireo olo-malaza Disney sy Pixar malaza dia hihaona amin'ny herinandro ambony ao amin'ny Disney Crossy Road
Amin'ny herinandro ambony dia azontsika atao ny miditra amin'ny endri-tsoratra Disney sy Pixar mihoatra ny 100 amin'ny Disney Crossy Road
Microsoft dia manamafy ny Minecraft ho an'ny Samsung Gear VR
Ireo mpampiasa fitaovan'ny zava-misy virtoaly Samsung Gear VR dia afaka mankafy ny Minecraft lehibe atsy ho atsy raha nohamafisin'i Microsoft
Lalao video 5 manandratra ny kalitaon'ny lalao amin'ny Android amin'ny fiaramanidina hafa
Lalao video 5 tonga tamin'ny 2016 ary mampiseho amintsika ny taona lehibe hananantsika amin'ny lalao Android
Google dia manambara fitaovana vaovao ho an'ireo mpamorona lalao
Google dia te hametraka ny marika amin'ity taona ity amin'ny lalao video ary noho izany dia mandefa fitaovana vaovao ho an'ny mpamorona.
Legacy Quest, RPG misy sary 3D a la Crossy Roads ary adika amin'ny teny Espaniôla
Legacy Quest dia RPG vaovao izay miaro ny sary Crossy Road 3D ary manana ny zava-drehetra ho lasa lalao mahafinaritra
Lalao vaovao tsy mahazatra izay tsy azonao adino
Amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra lalao kilalao vaovao 2 vaovao izay hialana voly aminao aho amin'ny fanandramana mikapoka ny naotin'ny namanao.
Mikaroha tontolo majika amin'ny sambo baorinao ao Sky Chasers
Sky Chasers dia lalao arcade izay tokony hifehezana ny sambo baorinao sy hanampy ny mpilalao fototra, Max. Fomba fijery Pixelated ho an'ny lalao video tsara
Dark Sword dia hack ary fanapotehana feno tanteraka izay tena avo lenta
Miaraka amin'ny fikitihana ny RPG sy ny kalitao teknika lehibe amin'ny lafiny rehetra, Dark Sword dia anisan'ny hack and slash tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Mandehana mamaky ny trano-maizina miloko feno aloka, fandrika ary sakana ao amin'ny Jump Buddy
Raha mitady kilalao video manintona anao ianao noho ny lokony, ny lalao ary ny kalitao avoakany, i Jump Budies no tena mety aminy. Mihantona
Mialà velona amin'ny planeta Mars amin'ity sehatra tsara antsoina hoe Straded: A Mars Adventure ity
Mila miala amin'ny planeta Mars ianao, satria izany dia tsy maintsy averina amin'ny sambo ao Strand: A Mars Adventure
Ady ny fahatsiarovanao handresena ireo mpanohitra ao amin'ny Random Fighters
Random Fighters dia manolo-kevitra ny hampiasa ny volondavenona ao amin'ny atidohanao mba hahatsiarovany ireo fitambarana manokana ireo ka hahafaty ny mpanohitra anao rehetra
Ampio ny zana-tsipika hanapoaka poeta ao Kitty Pawp: Bubble Shooter
Kitty Pawp: Bubble Shooter dia piozila mahafinaritra feno loko ary saka maro izay tsy maintsy ampianinao handroso amin'ny ambaratonga rehetra
Fanavaozana ny Hay Day miaraka amin'ny maody fanovana feno hanamboarana haingana ny tanimbolinao
Supercell dia nanavao ny Hay Day tamin'ny alàlan'ny fomba fanovana vaovao ao amin'ny toeram-pambolenao sy ny tanànanao mba hamonjy endrika dimy
Supercell dia manana rakitsoratra vaovao: mpilalao 100 tapitrisa isan'andro
Supercell dia manana rakitsoratra hafa: gamer 100 tapitrisa isan'andro milalao ny lalao video. Mampiseho antontanisa sy tarehimarika vitsivitsy ny horonan-tsary.
Lalao video mahafinaritra 5 sy maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android
Lalao video 5 maimaimpoana maimaim-poana amin'ity alatsinainy orana ity izay ahafahanao manana fotoana fialamboly amin'ny fitaovana Android anao
Hifehy endri-tsoratra efatra amin'ny tantara multidimensional izay atolotry anao ny Fahrenheit lehibe: Faminaniana Indigo
Fahrenheit: Indigo Prophecy dia seranana manokana natao ho an'ny Android izay ahafahanao mifehy tarehin-tsoratra efatra amin'ny tantara mampiahiahy
Miparitaka toy ny tsy misy olona hafa amin'ny fiolahana amin'ity mpihazakazaka tsy misy farany antsoina hoe Thumb Drift ity
Thumb Drift dia mpihazakazaka tsy manam-petra izay tena ilaina amin'ny fifehezana ny fiara mba hahazoana isa avo kokoa sy hamaha ny faribolana sy ny fiara
Ny lalao video tany am-boalohany No Humanity dia mihaika anao: afaka maharitra 15 segondra ve ianao nefa tsy maty?
No Humanity dia lalao tokana izay hametraka anao amin'ny fitsapana noho ny fahasarotany lehibe. Mazava ho azy fa mandany kalitao amin'ny lafiny rehetra
Noodlecake Studios dia mitondra mpihazakazaka tsy manam-petra iray hafa miaraka amin'ny fomba fijery mitsangana ao Road to be King
Road to be King dia mpihazakazaka Arcade tsy misy farany izay mampiavaka ny sary ary avy amin'ny Noodlecake Studios
Epic Flail, lalao ady tsy misy fanajana mba hanome anao fihomehezana amin'ny lalao multiplayer eo an-toerana
Epic Flail dia iray amin'ireo lalao mahatsikaiky indrindra any amin'izao fotoana izao raha manana namana hilalao azy ianao.
Ny stack dia avy amin'ny lalao Ketchapp mba hanolotra kilalao tsotra sy mahafinaritra izay manintona betsaka amin'ny lalao voalohany
Amidy ny Google Play Store miaraka amina fampiharana sy lalao video marobe amin'ny 0,50 €
Afaka miditra amin'ny fampiharana sy lalao video maro ianao amin'izao fotoana izao, nahena hatramin'ny € 0,50, anisan'izany i Nova Launcher, Today Calendar ary PowerAMP.
Batman VS Superman, iza no handresy amin'ny ady?
lalao ofisialy ho an'ny Android, noforonin'ny studio Warner Bros International mivantana ary mifototra amin'ny sarimihetsika Batman VS Superman
Androany aho te-hanolotra lalao 2 mampiankin-doha anao ho an'ny Android izay tsy ho azonao adino amin'ny Android anao raha iray amin'ireo mpampiasa tia lalao mahazatra ianao